Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Abụọ 34:1-33
Ihe ọma ndị Josaya mere (3-13)
A hụrụ akwụkwọ e dere Iwu Chineke (14-21)
ọlda buru amụma na ndị Juda ga-ahụsi anya (22-28)
Josaya gụpụtaara ndị obodo ya akwụkwọ e dere Iwu Chineke (29-33)
34 Josaya+ dị afọ asatọ mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ iri atọ na otu na Jeruselem.+ 2 O mere ihe ziri ezi n’anya Jehova, kpaakwa àgwà ka Devid nna nna ya. Ọ hapụghị ime ihe ziri ezi mewe ihe ọzọ. 3 N’afọ nke asatọ n’ọchịchị ya, mgbe ọ ka bụ nwata, ọ malitere ife Chineke Devid nna nna ya.+ N’afọ nke iri na abụọ n’ọchịchị ya, ọ malitekwara ime ka Juda na Jeruselem dị ọcha.+ O bibiri ebe ndị dị elu,+ ogwe osisi arụsị* dị iche iche, arụsị ndị a pịrị apị,+ na arụsị ndị a kpụrụ akpụ. 4 Ọ hụkwara na a kwaturu ebe ịchụàjà Bel, kụriekwa ihe ndị e ji adọsa insens ndị dị n’elu ha. Ọ kụrisịkwara ogwe osisi arụsị* dị iche iche, arụsị ndị a pịrị apị, na arụsị ndị a kpụrụ akpụ, gweriekwa ha, ha aghọọ uzuzu. O fesakwara uzuzu ha n’ili ndị na-achụburu arụsị ndị ahụ àjà.+ 5 Ọ kpọkwara ọkpụkpụ ndị nchụàjà Bel ọkụ n’elu ebe ha na-anọbu achụ àjà.+ Otú a ka o si mee ka Juda na Jeruselem dị ọcha. 6 Ọ gakwara n’obodo ndị dị n’ebo Manase, Ifrem,+ Simiọn, Naftalaị, nakwa ebe ndị dị ha nso a lara n’iyi, 7 kwatuo ebe ịchụàjà ha dị iche iche na ogwe osisi arụsị* ha, kụriekwa arụsị ha a pịrị apị+ ma gwerie ha. Ọ kụrikwara ihe niile e ji adọsa insens n’ala Izrel niile.+ Mgbe o mechara ihe ndị a, ọ laghachiri Jeruselem. 8 N’afọ nke iri na asatọ n’ọchịchị ya, mgbe o mechara ka obodo ahụ na ụlọ nsọ* dị ọcha, o ziri Shefan+ nwa Azalaya, Measaya onyeisi obodo, na Joa nwa Joahaz, onye na-edekọ ihe, ka ha gaa rụzie ụlọ Jehova bụ́ Chineke ya.+ 9 Ha gakwuuru Hilkaya bụ́ nnukwu onye nchụàjà, nye ya ego e wetara n’ụlọ Chineke. Ọ bụ ndị Livaị ndị na-eche ọnụ ụzọ ụlọ ahụ nche natara ego ahụ. Ha natara ya ndị ebo Manase, Ifrem, na ndị Izrel ndị ọzọ+ nakwa ndị ebo Juda, Benjamin, na ndị bi na Jeruselem. 10 E nyeziri ndị a họpụtara ka ha na-elekọta ọrụ a na-arụ n’ụlọ Jehova ego ahụ. Ndị na-arụ ọrụ n’ụlọ Jehova jizi ya rụzie ụlọ ahụ. 11 Ha nyere ndị omenkà na ndị na-arụ ụlọ ego ahụ ka ha jiri ya zụta nkume ndị a wara awa na osisi ndị a ga-eji mee ka ụlọ ahụ sie ike nakwa nke a ga-eji rụzie ụlọ ndị eze Juda hapụrụ ka ha dakasịa.+ 12 Ndị ọrụ ahụ jikwa obi ha niile rụọ ọrụ ahụ.+ A họpụtara Jehat na Obedaya, bụ́ ndị Livaị si n’agbụrụ Meraraị,+ nakwa Zekaraya na Meshọlam, bụ́ ndị Livaị si n’agbụrụ Kohat,+ ka ha na-elekọta ha. Ndị Livaị, ndị bụ́ aka ochie n’ịkpọ egwú,+ 13 na-elekọtakwa ndị nkịtị na-arụ ọrụ.* Ọ bụkwa ha na-elekọta ndị niile na-arụ ọrụ dị iche iche. E nwekwara ndị Livaị bụ́ ndị odeakwụkwọ, ndị isi, na ndị na-eche nche n’ọnụ ụzọ ámá.+ 14 Mgbe ha gara iweta ego e dowere n’ụlọ Jehova,+ Hilkaya onye nchụàjà hụrụ akwụkwọ e dere Iwu Jehova+ si n’aka Mosis nye.+ 15 Hilkaya gwara Shefan bụ́ odeakwụkwọ, sị: “Ahụrụ m akwụkwọ e dere Iwu Mosis n’ụlọ Jehova.” Hilkaya wee nye Shefan akwụkwọ ahụ. 16 Shefan wetaara eze akwụkwọ ahụ, gwakwa ya, sị: “Ndị na-ejere gị ozi na-arụ ihe niile a gwara ha rụọ. 17 Ha awụpụtala ego e nwetara n’ụlọ Jehova, ha enyekwala ya ndị a họpụtara ka ha na-elekọta ọrụ nakwa ndị na-arụ ọrụ.” 18 Shefan bụ́ odeakwụkwọ gwakwara eze, sị: “E nwere akwụkwọ Hilkaya onye nchụàjà nyere m.”+ Shefan maliteziri ịgụrụ ya eze.+ 19 Ozugbo eze nụrụ ihe e dere n’akwụkwọ ahụ e dere Iwu Mosis, ọ dọwara uwe ya.+ 20 Eze gwaziri Hilkaya, Ahaịkam+ nwa Shefan, Abdọn nwa Maịka, Shefan bụ́ odeakwụkwọ, nakwa Asaya bụ́ onye na-ejere eze ozi, sị: 21 “Gaanụ jụọ Jehova ase n’aha m nakwa n’aha ndị fọrọ n’Izrel na Juda. Jụọnụ ya gbasara ihe e kwuru n’akwụkwọ a a hụrụ, n’ihi na Jehova ga-ewesa anyị ezigbo iwe maka na nna nna anyị hà emeghị ihe Jehova kwuru. Ha emeghị ihe niile e dere n’akwụkwọ a.”+ 22 Hilkaya na ndị ahụ eze ziri ozi wee gakwuru Họlda onye amụma nwaanyị.+ Họlda bụ nwunye Shalọm nwa Tikva nwa Hahas, onye na-elekọta uwe. N’oge ahụ, Họlda bi n’ebe a na-akpọ Obodo Ọhụrụ na Jeruselem. Ha gara ebe ahụ gwa ya ihe mere ha ji bịa.+ 23 Ya asị ha: “Jehova bụ́ Chineke Izrel sịrị, ‘Gwanụ nwoke ahụ ziri unu ka unu bịa hụ m, sị: 24 “Jehova kwuru, sị, ‘M ga-eme ka ọdachi dakwasị obodo a na ndị bi na ya.+ M ga-ata ha ahụhụ niile e dere n’akwụkwọ ahụ+ ha gụrụ n’ihu eze Juda. 25 Ebe ọ bụ na ha ahapụla m+ na-achụrụ chi ọzọ dị iche iche àjà a na-esu ọkụ, si otú ahụ jiri ihe niile ha ji aka ha rụọ na-akpasu m iwe,+ iwe m ga-ewesa obodo a ga-adị ọkụ. M gaghịkwa akwụsị iwesa ha iwe.’”+ 26 Ma, gwanụ eze Juda, onye ziri unu ka unu jụọ Jehova ase, sị, “Jehova bụ́ Chineke Izrel sịrị: ‘A bịa n’ihe gbasara okwu ahụ ị nụrụ,+ 27 anụla m olu gị, ebe ọ bụ na ị kpọchighị obi gị, kama, i wedara onwe gị ala n’ihu Chineke mgbe ị nụrụ ihe o kwuru gbasara obodo a na ndị bi na ya, n’ihi na i wedara onwe gị ala n’ihu m ma dọwaa uwe gị, beekwa ákwá n’ihu m.+ Ọ bụ Jehova kwuru ihe a. 28 “Ọ bụ ya mere m ga-eji mee ka e lie gị otú e liri nna nna gị hà. A ga-eli gị n’ili gị n’udo. Anya gị agaghịkwa ahụ ahụhụ niile m ga-ata obodo a na ndị bi na ya.’”’”+ Ndị ozi ahụ wee gaa gwa eze ihe ha jetara. 29 Eze wee zie ozi, a kpọkọọ ndị okenye niile nọ na Juda na Jeruselem.+ 30 Eze na mmadụ niile bi na Juda na Jeruselem gaziri n’ụlọ Jehova, ma ndị nta ma ndị ukwu, ma ndị nchụàjà ma ndị Livaị. Ọ gụpụtaara ha ihe niile e dere n’akwụkwọ ọgbụgba ndụ ahụ a hụrụ n’ụlọ Jehova.+ 31 Eze guzo ebe ahụ ṅụọ iyi*+ n’ihu Jehova na ya ga na-eso Jehova nakwa na ya ga-eji obi ya niile na mkpụrụ obi* ya niile na-edebe iwu ya, na-eme ihe o kwuru, na-esokwa ntụziaka ya.+ O kwukwara na otú ọ ga-esi eme ya bụ ịna-eme ihe e dere n’akwụkwọ ọgbụgba ndụ a.+ 32 Ọ gbakwara ndị niile nọ na Jeruselem nakwa na Benjamin ume ka ha mee otú ahụ. Ndị bi na Jeruselem mekwara ihe e kwuru n’ọgbụgba ndụ ha na Chineke, bụ́ Chineke nna nna ha, gbara.+ 33 Josaya gaziri wepụ arụsị niile* dị n’ala Izrel niile.+ O nyekwaara onye ọ bụla nọ n’Izrel aka ijere Jehova bụ́ Chineke ha ozi. N’oge niile ọ nọ ndụ, ha akwụsịghị iso Jehova bụ́ Chineke ndị nna nna ha.
^ Na Hibru, “ụlọ ahụ.”
^ Ma ọ bụ “ṅụọ iyi ọzọ.”
^ Ma ọ bụ “ihe niile rụrụ arụ.”